Bloggards ကိုမုန်းတယ် Martech Zone
ငါ Bloggards မုန်း
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 26, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ရှေမှာရှိတယ် တိုင် ဒီရေးသားဖို့ငါ့ကိုသတိပေးသောသူ၏ site ပေါ်တွင်။
ငါ blogging ကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမုန်းတယ် Bloggards။ ဘလော့ဂါများအတွက်ပျင်းရိလွန်းသောဘလော့ဂါများအတွက်ကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့်ဝေါဟာရအသစ်သည်၎င်းသည်အခြားဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံစကားလုံးများဖြင့်စကားလုံးများကိုပြန်လည်ထွင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပျင်းရိသည်။ ခိုးယူမှုသည်မူရင်းဘလော့ဂ်ဂါထက်သူတို့၏စာမျက်နှာကိုသာလုပ်နိုင်သောကြောင့်ခိုးယူသည်။ ယခုတွင်သင်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံသည့်ဖော်ပြချက်တစ်ခုရှိပါကသင်စကားပြောဆိုမှုတွင်ထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒရှိပါက၎င်းသည် Blogging အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါက blogosphere မှာပြောတာပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဟာအခြားဘလော့ဂါတွေလိုကြိုးစားရတာလွယ်ကူတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ input အများကြီးရလို့ပါ။ တွန်းလှန်ပါ - ရှေ Godin
ထက်နိမ့်လာမယ့်အဆင့်ကို Bloggards အဆိုပါစုစည်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြစ်နှင့်သူတို့၏ site ပေါ်တွင်တင်ကြောင်းဆိုက်များဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား scum- suckers ရယ်စရာဖြစ်ကြသည်။ အဲဒါဟာ plagiarism ရဲ့အတိုချည်းပဲ။ သေချာတာပေါ့ - မင်းတို့တင်လိုက်တဲ့မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုသူတို့ပြန်ပို့ထားတဲ့လင့်ခ်ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာသူတို့ငွေရှာပြီးပြီ။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းသည်။
အကယ်၍ သင်ကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုတိုက်ဖျက်နိုင်မလဲဆိုတာသိရင်ဒီမှတ်ချက်ပေးပါ။ ငါကရပ်တန့်စေချင်တယ်
အပ်ဒိတ်: Copyblogger တစ် ဦး Bloggard ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤသည် Telegraph site ကိုနှုန်းအတိုင်းတင်ပြချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အမှားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
အပ်ဒိတ်: Ajay D'Souza ရဲ့အခိုးခံရတယ်
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်မူပိုင်ခွင့်အကြောင်းအရာ curatingအကြောင်းအရာခိုးယူအကြောင်းအရာယူပြီး
Inoffensive Clip-art: ခွင့်မပြုသည့်အဆီများ
ဘရိုင်ယန် Clark က
26:2006 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 44
သင်သည်ဤအချိန်မီပို့စ်ကိုမကြာသေးမီကဖော်ပြသည့်ဥပမာတစ်ခုဖြင့် update လုပ်သင့်သည်။ ငါသတင်းစာတစ်ပုဒ်ဘလော့ဂါခြစ်ရာဖမ်းမိရဘယ်လောက်အကြိမ်ဆိုလို?
26:2006 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 52
ဒါပေမယ့်သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ကမ္ဘာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အချို့မျှဝေခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမျှော်လင့်ထားသော်လည်း၎င်းကိုမူရင်းကိုထည့်သွင်းမထားပါကများသောအားဖြင့်အော်ဟစ်သံများရှိတတ်သည်။ တစ်ခုကထပ်လုပ်ရုံသာမကတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။
26:2006 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 07
ယောနသန်, ငါ 100% သဘောတူ!
27:2006 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 38
bloggards (သို့) spam aggregator တွေကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။
အကယ်၍ သင်သည် .htaccess ကိုသုံးလျှင် Aggregators ကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤတစ်ခုချင်းစီကိုစုစည်းရန်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
bloggards, ငါသံသယ, သူတို့ကတခြားသူတွေရဲ့ content တွေကိုခိုးယူခြင်းနှင့်မလေးစားခြင်းနှင့်အတူပျင်းရိလူသားဖြစ်ကြ၏! X (
2:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 34 မှာ
အိုးလူသား၊ အခြားကောင်းတဲ့ post 😀
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် Problogger.net ၏စာလုံးများကိုစာလုံးပေါင်းမိတ္တူကူးသော site တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါပြန်လာတဲ့အခါသူကအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး feed aggregator ကိုသုံးပြီးတောင်းပန်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့သူကတခြား site တွေကိုပြန်ကူးလိုက်တယ်။ Scum bastards = (
7:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 49 တွင်
သင် "ငါရေးပြီးခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းအသစ်ပဲ" ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။
'Bloggard' သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုသော Arthur Cronos ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ မူရင်း *၊ တကယ့်အစစ်အမှန်နှင့် Bloggard ၏တစ်ခုတည်းသော * စွန့်စားမှုများအတွက်, bloggard.com သို့ သွား၍ ဖြောင့်ဖြောင့်မုန့်ညက်ယူပါ။
7:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 11, 55 တွင်
2. သင်သည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်။ အလွန်ကောင်းပါတယ်!
မင်းကတရားဝင် Bloggard ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါမုန်းတယ်လို့ငါပြောနိုင်တယ်။
PS: Mobius Megatar ကစားနေသူတစ်ယောက်၏ဗီဒီယိုကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။
28:2007 pm မှာအောက်တိုဘာ 4, 21
ဟမ် ... bloggards ဟုတ်လား။
ကောင်းပြီဆိုရင်ဘလော့ဂ်ပေါင်းစည်းသူတွေဖြစ်ရမယ်။ (drum roll) bloggators (မီးရှူးမီးပန်း၊ pandemonium, quick fade)!
Hmmm၊ bloggator အတွက်တင်ပို့မှု ၇ ခုသာမဟုတ်ပါ၊ မဆိုးပါဘူး၊ မဆိုးပါဘူး၊ မူလဝီရိယကိုရရှိသည်